Tsy Faly Ny Maraokana Sasany Amin’ny Fandraisana Azy Ho Hollywood · Global Voices teny Malagasy
Tsy Faly Ny Maraokana Sasany Amin'ny Fandraisana Azy Ho Hollywood
Voadika ny 31 Mey 2016 5:48 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, македонски, русский, English
Aït Benhaddou ao Maraoka nipoitra tamin'ny horonan-tsarimihetsika Hollywood marobe. Sary avy amin'i Jerzy Strzelecki. CC BY 3.0
Ity lahatsoratra nosoratan'i Jake Warga ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 22 May 2016, ary navoaka eto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Toerana vonona hanaovana sarimihetsika midadasika i Maraoka — manomboka amin'ny fasika hatramin'reo tanàna. Natao ho solon'i Arabia amin'ny “Lawrence of Arabia“, Abu Dhabi amin'ny “Sex in the City 2,” Ejypta amin'ny “Evil Mummy” izy ary toerana nofinofy amin'ny “Game of Thrones.”
Saingy zara raha misy an'i Maraoka_Morocco amin'ny horonan-tsarimihetsika.
Narrimane Faquir, Maraokana mpamokatra sarimihetsika no talen'ny fifantenana ao an-toerana tamin'ny sarimihetsika taona 2014, “American Sniper” (misolo an'i Iraka i Maraoka tamin'ity iray ity). “Amin'ny sarimihetsika 100, angamba sarimihetsika telo no mampiseho an'i Maraoka,” hoy izy.
Mazava loatra, hoy izy, tsara ho an'ny toekarena ao an-toerana izany.
“Raha niasa tamin'ny ‘Black Hawk Down,’ izahay, nanana fakantsary 12 izy ireo, ary mpiasa 500. Manampy ny teknisiana hanana asa izany, dia afaka mamelona ny fianakaviany izy ireo.”
Saingy tsy i Faquir irery no manahy fa mety horaisin'ny maro amin'ny endrika ratsy ny firenena.
Tsy faly amin'ny fandraisana toy ny Hollywood ihany koa i Othman Naciri, Maraokana mpanatontosa horonan-tsarimihetsika. Mihevitra izy fa vitsy no fantatr'ireo trano mpanatontosa sarimihetsika Amerikana momba ny fireneny. Hoy fotsiny izy ireo “OK, Maraoka, aiza izany? Afrika Avaratra? Fasika, tany foana? OK, lavorary izany. Mora vidy kokoa ho antsika ny maka ary any raha oharina ao amin'ny tany efitra ao Arizona ary azo antoka kokoa ny fiarovana amin'ny fakàna sary any noho ny ao Iraka tena izy ka izany no marimarotra iraisana tsara indrindra.”
Tsy faly ihany koa i Nor amin'ny fomba fanehoana na famaritana ny mponina ao an-toerana amin'ny horonantsarimihetsika Amerikana.
“Aseho toy ny famantarana anondroana ny Arabo ny vahoaka Maraokana: mpampihorohoro, jiolahy, araka ny fomba fijerin'ny Amerikana. Fantatrareo, tsy dia lavitra amin'ny fomba fijerin'ny Tandrefana tamin'ny taon-jato 50 isika – amin'ny tsara, ny ratsy sy ny mahatsiravina! “
Nahafantatra ireo toerana sasany i Amal Idrissi, mpampianatra lalàna ao Maraoka raha teo am-pijerena ny “American Sniper.” Nahatezitra azy ny nahita ny fireneny toy ny toerana rotidrotiky ny ady satria “mampiseho an'i Maraoka tahaka ny firenena Afovoany Atsinanana hafa ao anatin'ny ady, amiko, amin'ny maha-Maraokana ahy, afaka manavaka tsara ny varavarana aho, afaka mamantatra tsara ny tilikambo aho, afaka mamantatra ny maritrano ary mahita mazava tsara fa tsy firenena Afovoany Atsinanana ao anatin'ny ady izany. “
Miezaka manohitra ny sary fampihorohoroana amin'ny alalan'ny fanondranana ny endriky ny vahoaka sy ny firenen'izy ireo manokana ny Maraokana mpanatontosa sarimihetsika.
“Mamokatra horonantsary lava 25 isan-taona ankehitriny i Maraoka, izay tsy ratsy mihitsy,” hoy i Naciri. Raha ny marina, nandray anjara tamin'ny Fetiben'ny Sarimihetsika tao Cannes ireo sarimihetsika Maraokana vao haingana.
Amin'ny sarimihetsika hotontosainy manaraka, mandray ireo lohahevitra saropady momba ny tantara Maraokana matetika iadiankevitra i Naciri. “Eo am-pikarakarana ny horonantsariko faharoa momba ny fanafahana ny vehivavy tao Maraoka nandritra ny taompolo 50s [aho] ankehitriny” hoy izy. “Tena zava-dehibe ny mijery ny tantaranay” hoy izy.
Mety ho sarotra ny mamarana tantara mikasika ny horonantsarimihetsika ao Maraoka raha tsy manonona ny sarimihetsika nivoaka tamin'ny 1942 “Casablanca,” sarimihetsika nametraka indrindra an'i Maraoka teo amin'ny sarintanin'ny horonantsarimihetsika.
Horonantsarimihetsika notontosaina manontolo tao amin'ny toerana nohofaina… tao Burbank, California.